कोरोनाकै कारण मर्ने खतरा कति छ ? हामी कतिसम्म डराउने ? | Nepal Flash
निक ट्रिगल (बीबीसी)
कोरोनाभाइरसलाई अदृष्य ज्यानमाराका रूपमा अर्थ्याइँदैछ। त्यसभन्दा डरलाग्दो अरू के हुन्छ र ?
त्यसो भए अब के गर्ने त ? केहीले सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुन्जेल विभिन्न कुरामा लगाइएका रोक कायम हुनुपर्ने भन्छन्। तर त्यस्ता तर्कले प्रतिबन्धहरू कायम राख्दा पनि अन्य खतरा निरन्तर हुने तथ्यलाई ध्यान दिएका छैनन्।
यूकेका प्रमुख स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रोफेशर क्रिश विटी यसलाई महामारीको 'अप्रत्यक्ष मार' भन्छन्। त्यसमा स्वास्थ्यसेवामा कम पहुँच, मानसिक रोगमा वृद्धि, आर्थिक कठिनाइ र शिक्षामा क्षति रहेका छन्।
शत प्रतिशत सुरक्षा किन अपेक्षा गर्नु हुँदैन ?
एडिनबरा विश्वविद्यालयमा विश्वव्यापी आम स्वास्थ्य समस्याकी प्रोफेशर देवी श्रीधर भन्छिन्, हामीले आफैले आफैलाई हामी सुरक्षित छौँ त ? भनेर सोध्नुपर्ने भएको छ।
'खतरा त जहिले पनि हुन्छ। कोभिड-१९ समुदायमा उपस्थित रहने भएपछि जसरी हामी सवारी चलाउँदा वा साइकल चलाउँदा खतरा कम गर्नेबारे सोच्छौँ त्यसैगरी यो रोगबाट कसरी हामीले खतरा कम गर्ने भन्ने सोच्नुपर्‍यो।'
व्यक्तिलाई कति खतरा छ ?
केम्ब्रीज विश्वविद्यालयका तथ्याङ्कशास्त्री प्रोफेशर डेभिड स्पीगेलहाल्टर भन्छन् यो त वास्तवमा 'खतरा व्यवस्थापनको खेल' बन्न पुगेको छ- र हामीले सामना गरिरहेको खतरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ।
आफूमाथिको खतरा कसरी विश्लेषण गर्ने ?
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी उमेर सम्बन्धी प्रोफेशर सारा हार्पर भन्छिन्, 'उमेरको जथाभावी प्रयोग'मा पुनर्विचार आवश्यक भएको र जोखिममा रहेकाहरूको समूहमा पनि त्यसको खतरा फरक फरक रहेको तथ्य केलाउनुपर्छ।